Dhallaanka mittens & kabaha Shirkadaha iyo Warshad - Shiinaha Soo saareyaasha dhallaanka
Ilmaha Lambskin Sock Booties / bootooyinka
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee Ustaraaliya, Raaxo, cufan oo waara. Aad u weyn oo cagaha yar diirran oo raaxo leh, oo loogu talagalay shandad lagu dhejiyo si ay kabaha ugu xajistaan ​​si raaxo leh meesha cagahaas yaryar ee qalloocan .. ● Qodobka maya: BS-003 ● Wuxuu ku furmayaa xirmo xidhan rubber Cinjir caag ah oo ka baxsan so Midab: casaan, beige, casaan, buluug iyo midabbo kale. ● Qiyaasaha: jaantuska cabbirka
Carruurta / Carruurta socod baradka ah ee maqaarka / lambskin Booties / kabaha
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee Australiyaanka ah, kaas oo raaxo leh, kobcinaya oo diirran Xirmooyinka tabeelleyaasha ayaa fududahay in lagu hagaajiyo faro yar. Kali ah 'EVA' oo cufan ayaa fudud oo jilicsan. Wanaagsan tahay laadadka gudaha baarkinka, fuulitaanka dhagxaanta xeebta ama ku soo laalaadinta magaalada ● Qodobka no: BS-002 ● Furo oo ku xirmo velcro rubber Cilad caag ah oo waara ● EVA oo keliya ● Midab: madow, bunni, geel, casaan , cawl iyo midabbo kale. ● Qiyaasaha: jaantuska cabbirka
Booties-yada Sheepkin-ka ee Ilmaha oo buuxa oo leh Velcro
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee Australiyaanka ah, Xiisad leh, dhumuc weyn oo waara. Wanaagsan in cagaha yar lagu diiriyo oo raaxo leh, oo loogu talagalay velcro oo ka dhigaysa mid si fudud loo dhajin karo loona ilaalin karo cagaha qulqulaya. -001 • Furo oo ku xidhaa velcro • Cilad caag ah oo la waari karo • Midab: madow, bunni, geel, casaan, cawl iyo midabbo kale. • Cabbirrada: shaxda cabbirka
carruurta / carruurta xiirta maqaarka idaha
Si xarrago leh ayaa loo qaabeeyey oo loo farsameeyey, Oo la sameeyey lambskin-ka ugu jilicsan, oo leh raaxo qafiif ah oo jilicsan oo dhogorta leh, Waa dabiici ahaan heerkul-kuleed sidaa darteed mittens-yadu waa kuwo qumman sanadka oo dhan. ku habboon isticmaalka maalinlaha iyo qabowga. ● Qodobka maya: KM-002 ● 100% Shearling Dhab ah ● Isgoysyada gacmaha oo iskutallaabta ah
Dhallaanka / carruurtu waxay suudh saaraan mittens
Si xarrago leh ayaa loo qaabeeyey oo loo farsameeyey, Oo la sameeyey lambskin-ka ugu jilicsan, oo leh raaxo qafiif ah oo jilicsan oo dhogorta leh, Waa dabiici ahaan heerkul-kuleed sidaa darteed mittens-yadu waa kuwo qumman sanadka oo dhan. ku habboon isticmaalka maalinlaha iyo qabowga. • Qodobka maya: KM-001 • 100% lambskin dhab ah • Muuji suun dheer oo isku xidha laba mitten • Midab: midabyo isku dhafan • Masax nadiif • shaxda cabirka